တစ်ဦး Maiko လိုပဲမိတ်ကပ်အပေါ်ထားလုပ်နည်း | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › တစ်ဦး Maiko လိုပဲမိတ်ကပ်အပေါ်ထားလုပ်နည်း
တစ်ဦး Maiko လိုပဲမိတ်ကပ်အပေါ်ထားလုပ်နည်း
တစ်ဦးက Maiko ဖြစ်လေ့လာနေသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ပုံမှန်အားသူမ၏အသားအရေ paler ပေါ်လာစေအဖြစ်သူမ၏နှုတ်ခမ်းများနှင့်မျက်စိပေါ်လွင်စေရန်မိတ်ကပ်အပေါ်တတ်၏။ ဒီ ‘ဂျပန်ရိုးရာအဖြူရောင်စတိုင်’ ဖို့ဘာသာအရာ shironuri စတိုင်ဟုခေါ်သည်, နှင့်အဖြူအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ Maikos ရိုးရာမိတ်ကပ်ထုတ်ကုန်ဝတ်ဆင်အဖြစ်ရှေးဂျပန်မှဆင်းပေးအပ်သည့်နည်းစနစ်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်း၌မိမိတို့ကျော်ကြားမျက်စိနှင့်နှုတ်ခမ်းပုံစံမျိုးစုံထပ်ဖွ။
maikos သုံးပါနှင့်သူတို့တစ်တွေအစဉ်အလာဂျပန်အမည်များရှိသည်သောမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတစ်ခုအကွာအဝေးရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်:
Bintsuke abura: အပေါ်အခြေခံအုတ်မြစ်ငါးပိနေကူညီခြင်းနှင့်ချောမွေ့ပေါ်လာဖို့အသုံးပြုတစ်ဦးကပဲပုပ်-based ဖယောင်း။ ဒါဟာအစမိတ်ကပ်အနေဖြင့်အရေပြားအပေါက်ထဲသို့ရတဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ယားယံစေကာကွယ်ပေးသည်။
Beni-hake: တစ်ဦးကအစဉ်အလာအသေးဖြီး, များသောအားဖြင့်ဆိတ်သငယ်ကိုဆံပင်ကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဂျပန်စတိုင်မိတ်ကပ်အတွက်မျက်စိနှင့်နှုတ်ခမ်းလိုင်းများလျှောက်ထားရန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Bintsuke abura: ဂျပန်အဖြူမတည်မရှိမှီအသုံးပြုသောတစ်ခုကရေနံသို့မဟုတ်ဖယောင်းအရောအနှောလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တက်ပါစေ။ ဒါဟာအရေပြားဖို့ငါးပိချောင်းကိုကူညီဖို့အဖြစ်ပိတျဆို့နတေဲ့ခံများမှအပေါက်ကိုရပ်တန့်ဖို့ပါပဲ။
Hake: များသောအားဖြင့်ဆိတ်သငယ်ကိုဆံပင်ကနေဖန်ဆင်းတော်တစ်ဦးကအစဉ်အလာဖြီး။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဂျပန်စတိုင်မိတ်ကပ်အတွက်အဖြူအခြေခံအုတ်မြစ်လျှောက်ထားရန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Kabuki oshiroi: အဆိုပါအဖြူအခြေခံအုတ်မြစ်သို့မဟုတ်ငါးပိ။
Komata: လည်ပင်း၏ nape များအတွက်ဂျပန်အမည်ဖြစ်တယ်။ ဤသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးကာမဂုဏ်ဧရိယာအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
Kona oshiroi: ပုံမှန်အားဖြင့်အဖြူရောင်အခြေခံအုတ်မြစ်ငါးပိထွက်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်အသုံးပြုတစ်ဦးကအဖြူရောင်အမှုန့်။
Shironuri: ဤစကားလုံး ” အဖြူရောင်ခြယ်သ ‘သို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။ ဤသည်အမည်ထူးခြားတဲ့ Maiko ကြည့်ဖန်တီးသောအခြေခံအုတ်မြစ်များ၏အရောင်အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦး maiko များအတွက်မိတ်ကပ်အပေါ်ချပြီး၏လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်စားသုံးဖြစ်တယ်, အများဆုံးကသူတို့ကိုကြောင့်ဝတ်ကူညီဖို့အခြားသူတစ်ဦးလိုအပ်ပါတယ်။ ရိုးရာဂျပန်မိတ်ကပ်အပေါ်ချပြီး၏ခြေလှမ်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ကြသည်။
1. ပထမဦးစွာ, အရေပြားဟာမိတ်ကပ်ပေါ်တွင်တင်မီပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ သငျသညျနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သင်၏မျက်နှာကိုလျှော်မည်သည့်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ကျန်ကြွင်းဖယ်ရှားပစ်သင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မိတ်ကပ်ပေါ်တွင်တင်နေချိန်တွင်သူတို့အပြားနေဖို့နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ထဲမှာဒါမှသင့်ရဲ့မျက်ခုံး brush သို့မဟုတ်ပေါ်သို့။ အခြေခံအုတ်မြစ်ပိုကောင်းအလေးထားဒါ Professional က maikos သူတို့ရဲ့အသားအရေနှင့်မျက်ခုံးအပေါ် abura bintsuke လို့ခေါ်တဲ့အရောအနှောကိုအသုံးပြုပါ။ Maikos ထုတ်ကုန်တွေဖုံးလွှမ်းခံနေရကနေတားဆီးနှင့်သင်ဖန်တီးနေသည့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအသွင်အပြင်ကိုလုယူနိုင်ရန်အတွက်ယခုသင့်ဆံပင်တက်ချပြီးအကြံပြုပါသည်။
2. White ကအခြေခံအုတ်မြစ်သို့မဟုတ် shironuri ငါးပိယခုပြင်ဆင်ထားသည်။ ဤဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ချိန်ကခဲနှင့်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်, သို့သော်, ယခုအဖြူအလှကုန်ပစ္စည်းအမှုန့်သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ရိုးရာဆန်အမှုန့်ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Kabuki oshiroi အခြေခံအုတ်မြစ်အထုပ်ယခုအခြေခံအုတ်မြစ်လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ တစ်တသမတ်တည်းငါးပိဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်သည်အထိအစဉ်အလာ, အမှုန့်ကိုရေနှင့်အတူမြေနှင့်ရောနှောဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ပိုမိုခေတ်မီပါဝင်ပစ္စည်းများအဆိုပါငါးပိအောင်ရိုးရှင်းသောနိုင်ဆိုလို။ အဖြူရောင်အခြေခံအုတ်မြစ်ငါးပိမှန်ကန်သောကိုက်ညီမှုဖြစ်ပါသည်ပြီးတာနဲ့မျက်နှာကိုအပေါငျးတို့သဒေသများကသက်ဆိုင်ပါသည်။ အတော်များများက maikos ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ရိုးရာ hake စုတ်တံကိုသုံးပါ, ဒါပေမယ့်အလှကုန်ရေမြှုပ်အဖြစ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အားလုံးဒေသများသို့အတူတူရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုချောမွေ့အောင်မြင်ရန်ဖို့ကြိုးစားနေအာရုံစိုက်ပါ။
သငျသညျလိုပါက3kona oshiroi အမှုန့်တစ်အလွှာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဤသည်အမှုန့်အောက်ရှိငါးပိထွက်ချောနှင့်အဖြူအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုထွန်းလင်းတတ်၏။ တစ်ဦးကပိုမိုကျယ်ပြန် hake ဖြီး, အမှုန့် puff သို့မဟုတ်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြီးကဒီမှာသုံးနိုင်တယ်။
4. Maikos လည်း၎င်းတို့၏လည်ပင်း, နား, အထက်ရင်ဘတ်နှင့်အထက်နောက်ကျောဖို့ shironuri အခြေခံအုတ်မြစ်သက်ဆိုင်ပါသည်။ မဖုံးကြောင်းတစ်ခုမှာဧရိယာလည်ပင်းသို့မဟုတ် komata ၏ nape ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက ” V ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်က ‘maikos ကသဘာဝအသားအရေအရောင်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျန်ရစ်ရ၏။ ဒါကကာမဂုဏ်ဧရိယာအဖြစ်ရှုမြင်သည်နှင့်ကီမိုနိုအင်္ကျီပေါ်တွင်တင်နေသည်တစ်ချိန်ကဒီ komata ဧရိယာမသိမသာထွက်မြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအားလပ်ရက်အဖြစ်အထူးအခါသမယ, တွင်သို့မဟုတ်တစ် maiko ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ geiko ဖြစ်လာသည့်အခါ, တစ်ဦး ” W ကအသွင်သဏ္ဌာန် ” အစား unpainted ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့နဂိုအတိုင်းကျန်ရှိနေဆဲအဆိုပါ hairline မှာအရေပြားတစ်ဦးတီးဝိုင်းကိုချွတ်ပြသမှတ်မိဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဤသည် maikos မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆံပင်ဝတ်ထားကြသည်ကို၎င်း, geiko မင်းသမီးဝတ်ဆင်သော wigs earnt ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းလက္ခဏာဖြစ်သည်။
5. Next ကိုပုခုံးကျော်ပန်းချီဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးကာလ၌, နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရမီးသွေးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်မျက်ခုံးသဘောထားပြင်းထန်ခြင်းနှင့်ခဲတံဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ Maikos အနီရောင်သို့မဟုတ်ပန်းရောင်အောက်၏ပါးလွှာသောမျဉ်းကြောင်းအတူပိုမိုပါးလွှာအနက်ရောင်မျက်ခုံးများသင့်ပါတယ်။ မှားယွင်းစွာပြုမိပါလျှင်မိတ်ကပ်အပေါငျးတို့သယခင်အလွှာကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်နောက်တဖန်စတင်ခံရဖို့ရှိသည်ကြောင့်ပညာရှင်များ, အမျက်ခုံး coloring ဂရုတစိုက်ပြုသင့်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကအရိပ်အယောင်လည်း eyeliner နှင့်မျက်စိခဲတံနှင့်အတူလုပ်ဖို့မိတ်ကပ်ညွှန်ကြားချက်၏ကျန်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
မျက်စိကိုလှည့်ပတ် 6. ပုံဆိုမိတ်ကပ်အနုပညာရှင်များအတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်တယ်, maikos အတူတူပါပဲ။ ခေတ်သစ် eyeliner ထုတ်ကုန်အသုံးသော်လည်း, အနက်ရောင်ဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါ caruncula ကနေအပြင်ဘက်ထောင့်မှ, မျက်စိပတ်ပတ်လည်ထိပ်ဖျားနဲ့အောက်ဆုံးဒေသများနှစ်ဦးစလုံးပွောပွပါ။ သင်ဤပါဝင်သည်ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်အတော်များများက maiko ဒီဇိုင်းများပြင်ထောင့်အနီးအနည်းငယ် ” တောင်ပံ ‘သို့မဟုတ်ဇာတ်ကားရှိသည်, ဒါပေမယ့်သင့်အခြားမျက်စိပေါ်တွင်ဒီဇိုင်းကိုမှအချိုးကျဖြစ်ရပါမည်။
7. ယင်းနောက်ကျနော်တို့မျက်စိပတ်ပတ်လည်အနီရောင်မိတ်ကပ်ထည့်ပါ။ ပထမဦးဆုံးဧရိယာဟာ caruncula, သို့မဟုတ်သင့်နှာခေါင်းဘေးမှာအတွင်းမျက်စိပတ်ပတ်လည်ပါပဲ။ တစ်ဦးကအသေးအောက်သို့ဇာတ်ကားသင်၏မျက်စိပိုကြီးပေါ်လာအောင်ကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဇာတ်ကားသာအရှည်တစ်ဝက်တစ်စင်တီမီတာသို့မဟုတ်ဒါဖြစ်သင့်သည်များနှင့်များသောအားဖြင့်အနီရောင် eyeliner သို့မဟုတ်ခဲတံနှင့်အတူပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိပတ်ပတ်လည်နောက်တစ်နေ့ဧရိယာအပြင်ဘက်ထောင့်အနီးမှာရှိ၏။ အနီရောင်၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့စက်ဝိုင်းဖြစ်စေတစ်ဦး eyeliner သို့မဟုတ်မျက်စိခဲတံနှင့်အတူရေးဆွဲနှင့်ရောင်စုံရပါမည်။ ဤစက်ဝိုင်းသာအချင်းတစ်စင်တီမီတာသို့မဟုတ်ဒါဖြစ်သင့်နှင့်သင့်မျက်ဝန်း၏အလယ်တွင်သည်အဘယ်မှာရှိ start သငျ့သညျ။ ဒါကဒီဇိုင်းကိုပြင်သည့်မျက်ခွံ၏ဒေသများနှင့်အောက်နှင့်မျက်စိနှစ်ဦးစလုံးကိုဖုံးလွှမ်း, ဒါပေမယ့်သင်ကသင့်ရဲ့အနည်းငယ် eyeliner ဇာတ်ကားထားကြပြီရှိရာအထက်မျက်ခွံပေါ်တွင်ပိုပြီးပေါ်လာဖို့စက်ဝိုင်းများအတွက်ရည်ရွယ်သင့်တယ်။ တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ဒီဇိုင်းမျက်ဝန်းနှင့်အညီစတင်ပြီးသားပေါ်မှာရေးဆွဲအနက်ရောင်လိုင်းများအထက်နှင့်အောက်အနီ eyeliner ကိုထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
8. မျက်နှာများ၏အသုံးပြုမှု geiko ထံမှ maiko ဆိတ်ကွယ်ရာသတ်မှတ်။ maiko သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်တွင်ပိုမိုပန်းရောင်နှင့်အနီရောင်ကိုသုံးပါနေချိန်မှာ Geiko တစ်ဦးထက်ပိုသောသိမ်မွေ့ကြည့်ကြိုက်တတ်တဲ့။ ဤသည်အလွန်ပါးပတ်လည်မျက်နှာများတွင်အသုံးပြုဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကြည့်ချီးမွမ်းဖို့ပန်းရောင်သို့မဟုတ်အနီရောင်ဖြစ်စေတန်ချိန်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်မျက်နှာသင်ယခင်ကအတွက်ထားကြပြီအဖြူရောင်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကျော်ယူချင်ကြပါဘူးအဖြစ်မျက်နှာမပျက်ကြောင်းအတော်များများက maiko မှတ်ချက်, စပါးအနည်းငယ်သာအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ တစ်ဦးမျက်နှာဖြီးအဖြစ်ကောင်းစွာသုံးနိုငျသျောလညျးသငျသညျ, တစ်ဦး hake ဖြီးနှင့်အတူပေါ်တွင်သင်၏မျက်နှာထားနိုင်ပါတယ်။
9. maiko မိတ်ကပ်အပေါ်ချပြီး၏နောက်ဆုံးအဆင့်နှုတ်ခမ်းနီဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ်ဂျပန်အတွက်နှုတ်ခမ်းနီပထမဦးဆုံးရေနှင့်အတူကဖော်စပ်, အနီ safflower ထံမှ coloring extracting ပြီးတော့သကြား crystals အတူတောက်ပြောင်အောင်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်သည်နှုတ်ခမ်းနီယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့နှုတ်ခမ်းဖြီးသို့မဟုတ် beni-hake နှင့်အတူလျှောက်ထားသည်။ အဆိုပါ maiko သို့မဟုတ်မိတ်ကပ်အနုပညာရှင်အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီအတွင်းနှုတ်ခမ်းကသာတစိတ်တပိုင်းရာဆွဲနိုင်အောင်တစ်ဖြီးအသုံးပြုသည်အဘယ်ကြောင့်ထိုအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းအဖြူအခြေခံအုတ်မြစ်တွေဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်နှငျ့သငျသေးငယ်, pouty နှုတ်ခမ်းအထင်ယောင်ထင်မှားဖန်တီးနိုင်ပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းရိုးရာဂျပန်ဗေဒဖို့ပိုဣတ္ပေါ်လာအတိုင်းဤပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ကျောအစောပိုင်း geisha နှင့် maiko ရက်စတငျရ။ နှုတ်ခမ်းနီလျှောက်ထားသည်ကိုမည်သို့အတော်များများလမ်းညွှန်ချက်များနေဆဲပြဌာန်းထားသည်။ ပထမနှစ်တွင်အလုပ်သင် maikos သာသာအနိမ့်နှုတ်ခမ်း၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်နှုတ်ခမ်းနီဝတ်ဆင်။ သူတို့တစ်တွေအနည်းငယ်နည်းစနစ်ကျွမ်းကျင်ကြတပြိုင်နက်, maikos နှစ်ဦးစလုံးအထက်နဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းပေါ်နှစ်ဦးစလုံးနှုတ်ခမ်းနီဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ တချို့က maiko နေဆဲရိုးရာနှုတ်ခမ်းနီပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏နှုတ်ခမ်းနီသို့သကြားရောထွေး – ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြည်းစမ်းဖို့သူတို့ရဲ့မျက်နှာချိုမြိန်အောင်!
သင်အချိန်ရှိပါကအိမ်တွင်သင်၏အ maiko ပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများအောင်မြင်ရန်မည်သို့ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်အွန်လိုင်းလဲ tutorial နှင့်ခြေလှမ်းများအတွက်အွန်လိုင်းကိုကြည့်! အမှု၌သင်တို့ကို, သင်သည်နောက်တဖန်မိတ်ကပ်ကိုချွတ်အပေါငျးတို့သညျဤအလွှာယူပုံကိုသိခငျြစခွေငျးငှါဘူး! shironuri ငါးပိများအတွက်အထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းသစ်ကိုမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေးရောနှောရှိပါတယ်။ အတော်များများကမိတ်ကပ်အနုပညာရှင်တွေအချို့ maiko ကလေးရေနံအခြားအကြီးအမိတ်ကပ် remover ကြောင်း shared သော်လည်းအခြားမိတ်ကပ်ဖယ်ရှားရေး Wipe အကြံပြုပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဘယ်လောက်မိတ်ကပ်တစ် maiko ကျီသူမကတက်ရောက်နေသည့်အဖြစ်အပျက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်ဦးကပိုပြီးတရားဝင်အဖြစ်အပျက်လေးမိတ်ကပ်အဖြစ်ပိုပြီးပီပီအဝတ်အစားအသုံးအဆောင်များလိုအပ်သည်။ အဆိုပါ maiko လေ့ကျင့်ရေးနေစဉ်ကသူတို့ဘွဲ့ရမတိုင်မီသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုများလုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်အဖြစ်တရားစီရင်ပိုင်နှင့်ပုံစံနည်းစနစ်, နှစ်ပေါင်းများစွာသွန်သင်ပေးနေကြသည်။ ဤသည်ကိုမိမိတို့ဘာသာမိတ်ကပ်အပေါငျးတို့သအလွှာအပေါ်ချပြီးပါဝင်သည်။ အတော်များများကပါရမီ maiko သုံးဆယ်မိနစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းဖို့ကိုတိုစေဤလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်!
Maikos များသောအားဖြင့်သူတို့ကနှစ်ပေါင်းရာချီအဘို့ပြုသကဲ့သို့ပညာရှင်များမှမြင့်သောလူတန်းစားဖျော်ဖြေပွဲပေးဖို့ဆက်လက်ရှိရာကျိုတိုဒေသတဝိုက်ကိုတွေ့နေကြပါတယ်။ အတော်များများက maikos ရုံ Maikoya Center မှာတွေ့ရှိရရှိသူများကဲ့သို့ခရီးသွားများနှင့်ဧည့်သည်များမှမိမိတို့၏ရိုးရာအနုပညာသရုပ်ပြရှင်းလင်းဖို့ခေါ်ဆိုမှုတွေ့ပြီ။
MaikoMaikoyaShinsaibashiအိုဆာကာကီမိုနိုmaiko တက်အောင်Maiko ကဖေးMaiko မီးဖိုချောင်Maiko လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများMaiko Up ကို MakeMaiko ေူပာင်းလဲရေးကိုUp ကို Make